सञ्चारमा कोरोना प्रभाव : कति पत्रकारले गुमाए रोजगारी ? | जनदिशा
सञ्चारमा कोरोना प्रभाव : कति पत्रकारले गुमाए रोजगारी ?
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसपछि लगाइएको लकडाउनका कारण मुलुको आर्थिक गतिबिधि प्रभावित हुँदा त्यसको असर पत्रकारिता क्षेत्रमा समेत देखिएको छ । चैत्र ११ मा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेयताको चार महिनाको अवधिमा सात प्रतिशत पत्रकारले आफ्नो रोजगारी गुमाएको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले कोरोना सङ्क्रमणका कारण हालसम्म सात प्रतिशत पत्रकारको रोजगारी गुमेको बताए । सञ्चारगृह व्यावसायिक हुन नसक्दा कोरोना सङ्क्रमणको छोटो अवधिमा धेरै नोक्सान भएको उनको भनाइ छ ।
कोरोना सङ्क्रमणले देशैभरका पत्रकार र सञ्चारगृह प्रभावित भएपछि महासङ्घको मिसन टोली देशव्यापी रूपमा परिचालन भएको छ । सोही क्रममा चितवन आइपुगेका आचार्यले एक कुराकानीका क्रममा कोरोना सङ्क्रमणपछि पाँच वटा रेडियो बन्द भएको जानकारी दिए ।
“स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसँगै सञ्चारकर्मी पनि अग्रमोर्चामा रहेका छन्”, उनले भने, “हामी आम जनताका समस्याका बारे बोलिरहेका छौँ भने जनतालाई सही सूचना के हो भनेर पनि प्रवाह गरिरहेका छौँ । आफैं अग्रपङ्क्तिमा रहेको सञ्चार क्षेत्र प्रभावित हुनुपरेको छ ।’
आचार्यले दुईथरी सञ्चारकर्मी रहेको भन्दै एक थरीले स्वरोजगारमूलक ढङ्गले पत्रकारिता गरिरहेको र अर्को थरी ठूला सञ्चार गृहमा काम गरिरहेको बताए । पचास प्रतिशतभन्दा बढी पत्रकार आफैँले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका चलाएको भन्दै उनले ती मिडिया चलाएका पत्रकारमा थोरै समस्या देखिए पनि ठूला मिडियामा धेरै समस्या देखिएको जानकारी दिए ।
“ठूला मिडियामा काम गर्ने कतिपय पत्रकारले तलब भत्ता नपाएको, कामबााट निष्कासित हुनुपरेको, आधा तलबमा काम गर्नुपरेको विदामा राखिएको छ”, उनले भने, ”यसबाट सदरमुकाममा बसेर काम गर्ने र वैकल्पिक पेशा नभएका पत्रकारहरु प्रभावित बढी प्रभावित भएका छन् ।” उनले थप अगाडि भने, “मिडिया बन्द हुनु र पत्रकार पलायन हुनु भनेको जनताको अधिकार, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासनलाई वकालत गर्ने मानिस पलायन हुनु हो ।”
पत्रकारलाई पलायन हुनबाट रोक्न सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष आचार्यले महासङ्घ र जिल्ला शाखाले आपतकालीन कोष खडा गरेको बताए । यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “आपतकालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीनरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”
मिडिया हाउसलाई सहुलियत पूर्ण ऋणदिन पनि उनले सरकारसंग माग गरे ।
महासङ्घका अध्यक्ष आचार्य र महासचिव रमेश विष्टको टोली गण्डकी प्रदेशबाट प्रदेश नं १ सम्म र उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलको टोली प्रदेश नं बाट ५ बाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म अनुगमनमा निस्किएको छ ।
महासङ्घले दुई हजार भन्दा बढी पत्रकारलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन गरी उनीहरुको अवस्थाको बारेमा सर्वेक्षण गरिरहेको महासचिव विष्टले जानकारी दिए । यस्तै शाखा अध्यक्षलाई २५ वटा प्रश्न पठाएर जवाफ माग्ने काम महासङ्घले गरिरहेको छ ।
Previous Previous post: बढ्यो कोरोना जोखिम: पर्सामा निषेधाज्ञा जारी, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासन आग्रह
Next Next post: आलु उत्पादन पचास प्रतिशत ह्रास